Kitendry Mini Calculator, Block vs Block ary lalao sy fampiharana maimaim-poana hafa izao | Vaovao IPhone
Fitsaboana inona re! Saika hikasika ny faran'ny herinandro isika amin'ny faran'ny herinandro. Tsy fantatro izay kasainao hatao, fitsangatsanganana? Topazo maso indray mandeha ny fizarana farany an'ny andian-tantara tianao? Miala sasatra fotsiny? Fa na inona na inona ataonao, amin'ny Vaovao IPhone manolotra andian-dahatsoratra izahay fampiharana sy lalao maimaim-poana hahafahanao mankafy ny tenanao eo anelanelan'ny spree sy spree.
Aza adino fa ny tolotra rehetra ho hitanao etsy ambany dia mitombina Fotoana voafetra ary vokatr'izany dia afaka mifarana amin'ny fotoana rehetra izy ireo. Sintomy haingana araka izay azo atao izy ireo mba handraisan-tsoa amin'ny tolotra, hamafana azy ireo ianao raha tsy tianao izany amin'ny farany.
1 Kitendry Mini Calculator
2 Bloka vs Block II
3 Lalao zazakely
Kitendry Mini Calculator
Tsy haiko hoe hatraiza ny fahafinaretanao amin'ity fampiharana ity, fa ny mazava dia ny mahasoa azy satria rindrambaiko fitendry izay manampy kajy amin'ny kitendryo amin'ny fomba toy izany, rehefa miresaka amin'ny namanao amin'ny WhatsApp, Messages, Telegram ary ny hafa ianao dia tsy mila miala amin'ilay app raha hikajiana ny isan'ny filalaovanao tsirairay amin'ny sakafo hariva rahampitso alina.
Kitendry Mini Calculator Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,09 € ary azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Kitendry Mini Calculator - Pluskeymaimaim-poana
Bloka vs Block II
Ary ankehitriny eny, manohy lalao iray izahay, «Block vs Block II» izay, araka ny eritreritrareo, dia a lalao manakana tena mitovy amin'ny Tetris malaza fa amin'ny fahitana manokana fa afaka mifanatrika amin'ny namana amin'ny fotoana tena izy ianao, na dia mampiasa fitaovana tsy iOS aza ianao, raha mbola eo ambanin'ny tambajotra WiFi iray ihany ianao.
Block vs Block II dia manana vidiny mahazatra € 3,49 ary azonao atao izao ny manafaka azy tanteraka.
Bloka vs Block II€ 2,99
Ary satria fantatro fa maro aminareo no manana ankizy kely ao an-trano, dia nahavita lalao natao ho an'ity izahay, ary hahafahanareo mandany fotoana bebe kokoa miaraka. Izy io dia «Lalao ho an'ny zazakely», lalao iray lalaovina beavers mampihomehy fa mila manampy amin'ny fanadiovana ny rano ianao mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny fanamboarany: misambotra trondro, manala vato, manapaka hazo…. Ny lalao dia miaraka amina mozika mahafinaritra natao manokana ho an'ny ankizy kely ao an-trano ary ho fanampin'izany, tsy misy dokambarotra sy fividianana ao anaty rindrambaiko ilay fampiharana, koa tsy atahorana izany.
Ny "Baby Games" dia manana vidiny mahazatra € 2,29 ary ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Kitendry Mini Calculator, Block vs Block ary lalao sy fampiharana maimaim-poana hafa izao
FCC dia namporisika an'i Apple hampihetsika ny chips iPhone FM hamonjy ain'olona